မမြင်ရသေးတဲ့ ရောင်နီဦးနဲ့အတူ ကျနော်တစ်ယောက် နိုးထလို့လာခဲ့ပြီ။ အလင်းရောင်ကို မမြင်ရသေးပေမယ့် အမှောင်ရယ်လို့ မထင်ခဲ့ဘူး။ သူမရဲ့အကြည့်တွေက အလင်းရောင်ကိုဖြိုခွင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လင်းလက်စေခဲ့တယ်လေ။ တနည်းအားဖြင့် ကျနော့်ဘဝကို မမှောင်စေခဲ့ဘူး။ (မလင်းပေမယ့် မမှောင်ခဲ့ပါ။ မှောင်နေပေမယ့် လင်းလက်နေခဲ့ပါတယ်။)
ကျနော့်ရဲ့တစ်နေ့တာခရီးကိုစတင်ဖို့ ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ အရင်ဆုံးမိတ်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တာ ဆိုပေမယ့် တစ်နေ့တာတွေပေါင်းလိုက်ရင်တော့ ဘဝရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးပေါ့။ ဘာတစ်ခုမှ မတည်မြဲတဲ့ ဘဝတွေမှာ တည်မြဲနေတဲ့ နိယာမတွေကို လိုက်ရှာကြည့်ပါ။ အမှားတွေမတည်မြဲသရွေ့ အမှန်တွေ ကလည်း တည်မြဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက ကတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်တူကိုယ်တူ ရှိနေကြဖို့ပါပဲ။ သွားလေရာအမြဲပါတတ်တဲ့ အရိပ်တွေလို စိတ်တွေကို အသိနဲ့ထိန်းချုပ်၊ မသိစိတ်ကို မြင်အောင်ကြည့်ပြီး ကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ ညှိယူလိုက်ရင် တည်ငြိမ်အေးဆေးတဲ့ ဘဝလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ရမှာ မလွဲပါဘူး။
တနေ့တာရဲ့အစကို ဘယ်အချိန်လို့ သတ်မှတ်ရင်ကောင်းမလဲ။ နေ့နဲ့ည ဆိုတဲ့သတ်မှတ် ချက်တော့ရှိတယ်။ တနေ့တာရဲ့အဆုံးကို ညလို့ သတ်မှတ်လိုက် တနေ့တာရဲ့အစက နေ့ဆိုတာ အလိုလိုသိကြမှာပါနော်။ အချိန်ကိုတော့ အတိအကျ မသတ်မှတ်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အစွဲနဲ့ကိုသာ မှတ်ကြပေတော့။ (လူတွေမှာ အစွဲရှိတယ်၊ အစွဲတွေကအမှန်တရားတွေဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။)တနေ့တာရဲ့အစ နေရောင်ခြည်ရဲ့အလှတရားကိုမြင်ခွင့်ရဖို့ ကျနော်တို့အားလုံး ကမ္ဘာကြီးကို ခိုစီးပြီး ခရီးနှင်ခဲ့ကြတယ်။ အကွေ့အကောက်တွေများပေမယ့် သွားရမယ့်လမ်းက ဒီတစ်လမ်းပဲရှိတာ။ စမ်းတဝါးဝါးလျှောက်ရင်း လမ်းမှာအိပ်စက်ရတဲ့ ညတွေလဲ များပြီ။ အခုညကလဲ အရင်ညတွေလိုပဲ။ နောက်ညတွေလဲ အခုညလိုပဲနေမှာပါ။ (တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျှက်.) တိတ်ဆိတ်ခြင်းက ညရဲ့ အလှပါ။ အိပ်မက်တွေကတော့ အနက်ရောင်ခြုံထားတဲ့ အမှောင်ညတွေအလယ်မှာ သင်းပျံ့ မွှေးကြိုင်စွာ ဖူးပွင့်နေကြလေရဲ့။ အရောင်အဆင်းကင်းတဲ့လေကို ရှူရှိုက်ရင်း ညနက်ကြီးတစ်ခုကို ဖြတ်သန်းကျော်လွန်ခွင့်ရတော့မယ်။ နေ့တာတွေရှည်ပြီး ညတာတွေတိုတဲ့အခါ အိပ်မက်တွေကို နှမျှောတယ်။ ညတာတွေရှည်ပြီး နေ့တာတွေတိုတဲ့အခါ အိပ်မက်တွေထွက်ပြေးသွားမှာ စိုးရိမ် နေမိတယ်။ နေ့တွေ ညတွေကိုဖြတ်ရင်း လမ်းပျောက်ခဲ့တာလဲ အခါခါပါပဲ။
ကမ္ဘာမြေကြီးကတော့ ခုတ်မောင်းဆဲ။ ...................................
မသဲမကွဲမြင်ရတဲ့ သူမရဲ့အရိပ်ကို ပုံဖော်ကြည့်ရင်း မိုးလင်းလို့လာခဲ့ပြီ။ နေမင်းကြီးရဲ့ အကြင်နာအလင်းတွေက ညကမ္ဘာကိုတိုက်ဖျက် အလင်းရောင်ကိုမြင်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီ။ အာရုံဦးလေကို ရှူရှိုက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး။ လူတွေလဲ သွားလာလှုပ်ရှားနေကြပြီ။ စကားလုံးတွေလဲ အသက်ဝင်လာခဲ့ပြီ။ (ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပဲ သိမ်းထားလို့ရရင်ကောင်းမှာပဲနော်။) မြူမှုံတွေ က နေတဲ့ အလှကိုလည်း မြင်ခွင့်ရခဲ့ပြီ။ မမြင်ရတာက ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ည။ တမ်းတမ်းတတရှိနေတာ သူသိပါ့မလား ? သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုကြည့်ရင်း ရင်မောနေမိတယ်။ စကားလုံးတွေ လဲလှယ်တဲ့ပွဲကို တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲ ကျင်းပနေကြလေရဲ့။ အနိုင်အရုံးတွေက အဓိကမကျပါဘူး။ လူတိုင်းသိထားရမှာက ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ တခြားသူတွေကို မထိခိုက်စေဖို့ပါပဲ။ ခိုက်ရန်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူး။ ဟန်ဆောင်ပြီးပြုံးတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ ရင်မဆိုင်ချင်ဘူး။ စကားမဟုတ်တဲ့စကားတွေကို နားမထောင်ချင်ဘူး။ တစ်ယောက်တစ်မျိုး ရူးနေကြတဲ့ကမ္ဘာမှာ မရူးတဲ့သူက အရူးပဲ။ (ရူးလို့ပြောတယ်မထင်ပါနဲ့၊ ကျနော်သူ့ကို တကယ်ချစ်တာပါ။)
စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ လမ်းလျှောက်ချင်တယ်။ စိတ်ရှိလက်ရှိချစ်ဖို့ ကျနော့်မှာ အင်အားအပြည့်ရှိတယ်။ အလင်းရောင်တွေနဲ့ ကျနော့်အချစ်တွေကို ပေးမတွေချင်ဘူး။ သူများမြင်မှာစိုးလို့။ ရိုးတာကို အ,တယ်လို့ ပြောချင်ကြသလို၊ မရိုးတဲ့သူတွေကိုတော့ လည်တယ်လို့ ပြောချင်ကြတယ်။ ခင်ဗျားရော ရိုးချင်သလား? မရိုးချင်သလား? လူ့လောကကြီးက မနေပျော်ပါဘူး။ တနေ့သေရမှာ သိလျက်နဲ့ အမုန်းမပွားသင့်ဘူးနော်။ ခံစားချက် ရှိသူတွေ ခံစားရတဲ့အခါ ခံစားချက်မရှိသူတွေ မခံစားရတာ သဘာဝကျလား ? အပြန်အလှန်ထားတဲ့ မေတ္တာတွေမှာ တူညီမှုရှိသလား ? တစ်ခါတလေကြ ဝေဝါးနေတာပဲကောင်းတယ်။ သောက်စရာ မရှိတဲ့အခါ အရမ်းသောက်ချင်တဲ့ရောဂါကလဲ မသေးဘူး။ အဝေးမှာနေနေရပေမယ့် နီနေသလိုပါပဲ။ စွဲလမ်းတမ်းတမှုတွေနဲ့ ကျနော် အမြဲတစ်ထပ်တည်းကျနေခဲ့တယ်။
ပြင်လို့မရတဲ့အမှားတွေကို မှားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ စွဲလမ်းနေမိတယ်။ လူသားအားလုံးပျော်ရွှင်ဖို့ ကျနော် မရယ်ရဘူးဆိုရင် တသက်လုံး မရယ်ဘဲနေနိုင်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ခိုစီးပြီး ခရီးနှင်ရတာ အားနာလာတယ်။ နေမင်ကြီးကတော့ သာဆဲ ညမင်းကြီးကတော့ နေမင်းကြီး အလာကို စောင့်ရင်း လူတွေရဲ့အတွေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပြုံးနေလေရဲ့။(ဘာတွေရေးနေတာလဲ လို့တော့ လာမမေးနဲ့။) ရက်ရက်စက်စက်လှတဲ့ ကောင်းကင်ကြီးကို ချစ်တယ်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တောကြောင် at 1:59 PM
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် အားယူနေဆဲ အဖူးအပွင့်များ, တောကြောင်
လူ့လောကကြီးက မနေပျော်ပါဘူး။ တနေ့သေရမှာ သိလျက်နဲ့ အမုန်းမပွားသင့်ဘူးနော်။
(လူတွေမှာ အစွဲရှိတယ်၊ အစွဲတွေကအမှန်တရားတွေဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲနော်။)
သောက်စရာ မရှိတဲ့အခါ အရမ်းသောက်ချင်တဲ့ရောဂါကလဲ မသေးဘူး။
ပြင်လို့မရတဲ့အမှားတွေကို မှားမှန်းသိသိကြီးနဲ့ စွဲလမ်းနေမိတယ်။
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်ဗျ။ ဒီဘလော့ဂ်လေးကို အသက်ဆက်နိုင်အောင် အခုလို ပါဝင်အားဖြည့်တာ ကျေးဇူးဗျ။